आखिर किन पड्किन्छ फिल्म सुटिङमा गोली ! « Khabarhub
आखिर किन पड्किन्छ फिल्म सुटिङमा गोली !
काठमाडौँ– प्रहरीका सामु दिएको बयानलाई आधार मान्ने हो भने अभिनेता एलेक्स बाल्डविनको हातमा सहायक निर्देशकले थमाएको बन्दुक सुरक्षित भएकोमा उनी ढुक्क थिए । उनी जति नै ढुक्क भए पनि त्यही बन्दुकबाट निस्केको गोलीले सिनेमाटोग्राफर हाल्यना हुटचिन्सको देहलीला समाप्त भयो । रस्ट फिल्म सुटिङको सिलसिलामा अमेरिकामा यो दुःखान्त भएको हो ।
बाल्डविनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको जनाएका छन् । सिने उद्योगमा यस किसिमको दुर्लभ र दुःखद घटना भएको एक साता पनि भएको छैन । घटनाको दुई दिनपछि बाल्डविनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस दुखद घटनाका कारण कसैले आमा र कसैले श्रीमती गुमाए, हामीले एक सहकर्मी गुमाएका छौँ ।’
गत बिहीबारको उक्त घटनामा बाल्डविनको हातबाट छुटेको बन्दुकको गोलीले ४२ बर्सिया हाल्यनाको मृत्यु भएको हो । रिहर्सल भइरहेको समयमा उनको पछाडि रहेका निर्देशक ४८ वर्षीय जोल साउजा घाइते भएकी छिन् ।
प्रहरी पनि के कुराको नजिक पुगेको छ भने सहायक निर्देशक डेभिड हल्सले वाल्डविनलाई बन्दुक थमाउँदा सक्कली गोली नभएकोमा विश्वस्त तुल्याएका थिए । यसपछि वाल्डविनले प्रहार गरेका गोली हाल्यनाको छातीमा लागेको थियो । उनी अस्पतालमा मृत घोषित भइन् ।
यसअघि पनि बन्दुकको सुरक्षा तथा कोभिड सुरक्षा दुवैको कारण जनाउँदै धेरैले फिल्म युनिट छाडेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका छन् । ज्यानै जाने यस खालको दुर्घटना हुनुअघि छाड्नेमा हाइ प्रोफाइल कलाकार नभएर युनिटका सामान्य कर्मचारी भएका कारण धेरै चर्चा भएन ।
सुरक्षासम्बन्धी समाचार प्रकाशमा आएपछि रस्ट फिल्मले आफ्नो टिम सुरक्षाको सवालमा गम्भीर भएको तथा ती सबै अफवाहमात्र भएको दाबी गरेको थियो । हाल्यनाको मारिएको आधा घण्टाअघि पनि केही कर्मचारीले युनिट छाडेका थिए ।
त्यहाँ अहिले कसैको विरुद्धमा पनि अभियोग पत्र दर्ता भएको छैन तर प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान जारी राख्ने जनाएको छ ।
यसरी युनिट छाड्नेहरूले आफूहरूलाई सुटिङ स्थलभन्दा ८० किलोमिटर टाढा राखिएको गुनासो गरेका थिए ।
घटनालगत्तै प्रशासनमा खबर गरिएको थियो । युनिटकै एक सदस्यले बोनाजा क्रिक रन्च पार्कमा सुटिङको समयमा दुर्घटना भएको र तत्काल सहयोग चाहिएको बताएका थिए । खबर गर्ने एक महिलाले दुर्घटनापछि सबैको भागाभाग मच्चिएको बताएकी थिइन् ।
केही दिनसम्म सुटिङ गर्ने तयारीका साथ युनिट त्यहाँ पुगेको थियो । बन्दुक पड्किए पछि प्रहरी प्रशासनले सबै पक्ष आफ्नै निगरानीमा राखेको छ । अभियोगपत्र दर्ता नभए पनि ६३ वर्षीय अभिनेता वाल्डविनलाई प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ ।
निधन भएकी ४२ वर्षीय हाल्याना युक्रेनको राजधानी किभमा जन्मिएकी थिइन् । आर्टिक सर्कलमा रहेको सोभियत सैन्य शिविरमा उनी हुर्किएकी थिइन् । उनले अमेरिकाको लस एन्जलसमा सिनेमासम्बन्धी अध्ययन गरेकी थिइन् ।
सोही समयमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उनलाई सन् २०१९ मा ‘राइजिङ स्टार’ को उपमा दिएका थिए । सन् २०२० मा उनी एडम इजिप्ट मोर्टीमरको निर्देशनमा रहेको चलचित्र आर्चेनेमीमा फोटोग्राफी निर्देशक रहेकी थिइन् ।
हल्यानामा सैन्य शिविरमा हुर्कने क्रममा चलचित्र क्षेत्रको मोह जागेको उनलाई बाल्यकालदेखि चिन्नेहरू बताउँछन् । फिल्ममा रुचि भए पनि उनी पत्रकारिताको अध्ययन सकेर पूर्वीयुरोप खोजमूलक पत्रकारितामा सक्रिय भइन् ।
लस एन्जल्स पुगेपछि हाल्यनाको सक्रियता फिल्ममा मात्र नभएर फेसन फोटोग्राफीमा पनि थियो । लस एन्जल्समा सिनेमाटोग्राफर बब प्राइमलाई भेटेपछि उनी अमेरिकी फिल्म इन्स्टिच्युट कन्चरभेटरीमा आबद्ध भइन् । प्राइमको सल्लाहमा उनले त्यहीँ स्नातकोत्तर अध्ययन गरिन् ।
हाल्यनाले पछिल्लो समय काम गरेका डार्लिन, ब्लान्ड फायर र म्याड हेटर अत्यन्त चर्चामा छन् ।
हलिउडमा फिल्म सुटिङमा गोली पड्केर फिल्मकर्मी मरेको घटना यो नै पहिलो होइन । सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैन । हरेका घटनाले तनाव र चोट दुवै दिने गरेको छ । यतिबेला सिङ्गो हलिउड शोकाकुल छ ।
६३ वर्षीय वाल्डविन अमेरिकी सिने उद्योगका लोकप्रिय र सफल कालाकारको रूपमा स्थापित छन् । कमेडियन र फिल्म निर्माता रहेका उनी राजनीतिमा समेत सरिक छन् । सन् १९८८ मा रिलिज भएको टिम ब्रटनको ‘ब्रिटी जुस’, माइक निकोलासको वर्कीङ गर्ल र मेरिड टु ड मब उनका अत्यन्त सफल र चर्चामा रहका चलचित्र हुन् ।
वाल्डविन चार दाजुभाइ नै अभिनेता हुन् । यीमध्यका एलेक्स जेठा हुन् । उनै ज्येष्ठ वाल्डविन सन् २००६ देखि २०१३ को समयमा अत्यन्त सफल रहे ।
वाल्डविनले सोही समयमा तीन पटक प्राइम टाइम एमी अवार्ड, तीन पटक गोल्डेन ग्लोब अवार्ड र सात पटक स्क्रिन एक्टर गुयल्ड अवार्ड पाए ।
सिने इतिहासमा सात पटक उक्त अवार्ड पाउने उनी पहिलो अभिनेताको रूपमा उनका् कीर्तिमान समेत रहेको छ ।
सन् १९८७ मा बनेको फरएभर एलेक्सको पहिलो फिल्म थियो । सन् १९९० मा हन्ट फर रेड अक्टोबरमा लिड रोल गरेपछि उनको वाहवाही हुन थालेको हो । यसपछि नै उनलाई लिड रोलको प्रस्ताव धेरै आउन थालेको हो ।
सन् १९९१ मा फिल्म म्यारिङ म्यानमा सँगै अभिनय गरेकी किम वासिङगरसँग पछि उनले विवाह गरे ।
थुप्रै सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुका बाबजुद यसरी सुटिङकै क्रममा बन्दुक पड्किएर मान्छे मरेको घटना पहिला पनि भएका हुन् ।
सन् १९९३ मा ‘द क्रो’ को सुटिङको क्रममा ब्रुस लीका छोरा ब्रान्डन लीको यसै गरी निधन भएको थियो । सन् १९८४ मा अभिनेता जोन एरिक हेक्सम सुटिङको दौरान बन्दुक चलाउँदै बसेका थिए । खाली ठानेर जिस्कँदा आफ्नै टाउकोमा गोली लागेर उनको ज्यान गएको थियो ।
ब्रुस लीका छोरा ब्रान्डन लीलाई ९० को दशकको सुरुवातमै संसारमा प्रभाव जमाउने तथा बाबुकै जस्तो स्टार बन्ने सम्भावना भएका अभिनेताको रूपमा धेरैले हेरेका थिए । अभिनय, मार्सल आर्ट र सुन्दर अनुहार ब्रान्डनका विशेषता थिए ।
तिनै ब्रान्डन ‘द क्रो’ को रिलिजसँगै स्टारको रूपमा उदाउने अनुमान थियो । यो नै उनको ब्रेक थु्र फिल्म रहने र संसारमा नयाँ सुपर स्टारको उदय हुने अनुमान थियो । दुर्भाग्य ! यो फिल्म पूरा हुन नपाउँदै उनले यो संसार छाडे ।
आठ वर्षको उमेरमा ब्रान्डनले बाबु ब्रुस लीलाई गुमाएका थिए । तिनै ब्रान्डनले बाबुको पथ पछ्याउनकै लागि इमसर्न कलेजमा कलाको विषय अध्ययन गरेका थिए ।
अमेरिकामा क्रोमा अभिनय गर्ने अवसर पाउनु र सो दुर्घटना हुनु धेरैअघि नै सन् १९८६ मा उनले हङकङ एक्सन चलचित्र लिगेसी अफ रेजको लिड रोल गरेका थिए । यसका साथै डाउन इन लिटल टोकियो र लिटल फायरमा उनको अभिनय र एक्सनले धेरैलाई प्रभाव पारेको थियो ।
बान्डनले २८ वर्षको उमेरमै आफ्नो जीवन गुमाए, फिल्म क्षेत्रले एक होनहार प्रतिभा गुमायो ।
सन् १९५७ मा जन्मिएका अभिनेता जोन एरिक एन्समले पनि यसै खाले नियति भोगेका थिए । सन् १९८४ अक्टोबर १८ का दिन उनी आफैँले चलाएको बन्दुक टाउकोमा पड्केर मरेका हुन् ।
अक्टोबर १२ को दिन गोल्डन अपच्र्युनर्टी सिरिज मुभीको सातौँ संस्करणको सुटिङ भइरहेको थियो । सुटिङ निर्धारित समय तालिकाभन्दा ढिला भएकाले एरिक बेचैन थिए । बेचैनीका कारण मन बहुलाउन उनले बन्दुकसँग खेल्दै थिए ।
त्यही बन्दुकको गोलीले घाइते भएका उनले वेभर्ली हिल्स मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा छैठौँ दिन २६ वर्षको उमेरमा जीवन त्यागे ।
सुटिङमा रहेको बन्दुकमा कसरी गोली भरियो भन्ने चासो बढेको छ । हलिउडमा यो समस्या पहिलेकै हो । अहिलेको यो समस्याले हाल्यनाको ज्यान लियो । सिङ्गो सुटिङ युनिटलाई शोकाकुल बनायो भने अभिनेता एरिक वाल्डविनको जीवनमा अर्को सङ्कट थपेको छ ।
वाल्डविन निर्दोष छन् कि दोषी भन्ने कुरा अनुसन्धानले पत्ता लगाउने नै छ । उनलाई यो घटनाले केही समय तनाव र चोट दुवै दिएको छ । सिङ्गो हलिउड क्षेत्र शोकाकुल छ ।
प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७८, आइतबार ९ : ५५ बजे